कसरी पिउन एक मेक्सिकन रक्सी संग कृमि
बीचमा को रक्सी मेक्सिको लागि जानिन्छ यसको, तर केवल केही थाहा छ कि त्यो एक»ठूलो भाइ»- देखा जो धेरै पहिले हुनेछ । वास्तवमा, एक को धेरै प्रकार को. तपाईं प्रदान गर्न अझ बढी सिक्न यो अचम्मको पिउन र संस्कृति को आफ्नो प्रयोग. (स्पेनिस»पिउन») एक परम्परागत मेक्सिकन रक्सी किल्ला — डिग्री प्राप्त, किण्वन र पछि आसवन को रस को केही प्रजातिहरू को (बोट को) को वाहेक संग चीनी र अन्य सामाग्री. मा आसवन (आसवन) को मेक्सिकन कुल देखि सिकेका स्पेनी आए जो आफ्नो इलाका मा शताब्दीका । यो पछिल्लो, भारतीय पिए संदिग्ध सेतो तरल- एक कम मादक पेय पदार्थ (डिग्री) देखि किण्वित रस को को. स्पेनी सन्तुष्ट छैन, तिनीहरूले संग प्रयोग गर्न थाले स्थानीय कच्चा माल प्राप्त गर्न, एक वास्तविक»आगो-पानी». चाँडै यो प्रयास को को विजयी ताज पहनाया संग सफलता. पहिलो उल्लेख मिति देखि वर्ष.»धर्म पिता»को पिउन भनिन्छ पेड्रो, स्थापित गर्ने पहिलो कारखाना आफ्नो उत्पादन लागि. रक्सीको स्पेनी, भए राष्ट्रिय पिउन को मेक्सिको. प्रविधि को उत्पादन को धेरै सरल छ । पहिलो फल को, वृद्ध — वर्ष, कट फूल पहिले. यस अवधिमा तिनीहरूले समावेश सबैभन्दा ठूलो राशि को स्टार्च लागि आवश्यक किण्वन । अर्को, उपचार छ, छोडेर पिउन मात्र कोर को फल हो । साफ राखिएको छ मा एक विशेष स्टोन दुखेर चोटीदार आकार र सुखा दिन को लागि. त्यसपछि चोट फल उमालेको मा एक सम्म एक टास्ने जन.
साल थियो मात्र एक समय छ । परिणामस्वरूप पेय द्वारा डिग्री निकै सानो मा गुणवत्ता को, दुई पटक । तर पछि स्विच गर्न डबल गुणस्तर दुवै पेय बराबर थियो. पछि पुन, आसवन को रक्सी सामग्री को छ, त्यसपछि यो पानी संग पतला गर्न इच्छा शक्ति छ । कच्चा माल छ । को उत्पादन को लागि चार आधारभूत प्रजातिहरू को र बनेको छ मात्र देखि रस को नीलो कोर छ । प्रविधि । सबैभन्दा प्रकार को चिनी थप्न, छ स्वीकार छैन । बाँकी आधुनिक कुकिंग प्रविधी को दुवै पेय समान छन् । क्षेत्र । उत्पादित छ भर, मेक्सिको र स्थानीय पिउन को राज्य को पिस्को, यो मा बनाएको छ एक सीमित क्षेत्र । उपस्थिति को. केही निर्माताहरु मा थप एक बोतल कमला, परजीवी मा पात र फल को. यो उद्देश्य कीरा हामी छौँ नजर पछि, त्यतिन्जेल, म ध्यान दिनुहोस कि शट संग कमला हुदैन । तल को केही बोतलें को तपाईं देख्न सक्छौं अनौठो सेतो कृमि. यो पेटी, एक पुतली — परजीवी कि जीवन मा. कीरा दुई प्रकार को छ: रातो र सेतो (स्वर्ण). सबैभन्दा प्रतिष्ठित पेय मात्र जोडी रातो कमला कि जीवन मा हृदय को. सेतो»कीराको»जीवन मा पात बढ्न र उहाँलाई फसाउन सजिलो छ, त्यसैले यो छैन रूपमा बहुमूल्य रूपमा आफ्नो रातो. तर निर्धारण प्रजाति को पेटी मा बोतल संग समाप्त गाह्रो छ । भन्ने तथ्यलाई को प्रभाव अन्तर्गत रक्सी कुनै पनि कीरा हुन्छ बेरंग छ । यो धूर्त कदम, दृढ ध्यान आकर्षित गर्न आफ्नो उत्पादनहरु । केही समय पछि, अन्य ब्रान्डहरु छ उधारो को सफल अनुभव छ । पहिलो, यो उपस्थिति को कृमि थियो कारण गर्न इच्छा देखाउन उच्च गुणस्तर (मा, एक राम्रो रक्सी कीरा छैन विघटित) र वृद्धि विरुद्ध सुरक्षा. त्यसपछि तिनीहरूले सुरु गर्न विशेषता गुण निको छ कि वृद्धि र पनि संग संचार को आत्मा संसारमा । देखेर सफलता प्रतियोगिहरु, को उत्पादकहरु को फैलाउन थाले अर्को मिथक -«कीराको»कारण विभ्रम. वास्तवमा, यी लाभ्रेकीरालाई छन् अहानिकारक । तिनीहरूले छौं विशेष बढेको जवान छैन भनेर संग संभाला कीटनाशकों । त्यसपछि अर्को वर्ष मा राखिएको शुद्ध रक्सी मार्न. बोतल को संग एक कमला द्वारा चिह्नित स्ट्रिङ वा. यी पेय सुरक्षित छन् र स्वाद देखि कुनै फरक जहाँ ती कुनै»कीराको». खान कमला वैकल्पिक छ. भने कीरा घृणित छ, यो सम्भव छ गर्न देखि निकालन को बोतल र बस यो फाल्नु. यसको शुद्धतम फारम मा छ । पेय सेवा छ, कोठा को तापमान मा. संस्कृति यसको प्रयोग को जस्तो पिउने को. मा खन्याइन् शट चश्मा र पेय मा सानो फसाउन प्रयास, सबै स्वाद टिप्पणीहरू । प्रत्येक कलाकार बनाउँछ आफ्नो उत्पादन अद्वितीय थपेर को संरचना मा फलफूल, मह र अन्य सामाग्री. एक परिणाम रूपमा, देखा, अधिक एक सय प्रजातिहरू संग पूर्ण विभिन्न स्वाद छ । उदाहरणका लागि, रूस एक लोकप्रिय संग नाशपाती, फल मा राखिएको छ सारा बोतल । खाने भाँडा संग अनुभवी मसालेदार सस र मसला । यो राम्रो जान्छ संग बीफ, पोर्क, चिकन, सिमी, आलु, चीज र पनि माछा । अनुसार मेक्सिकन परम्परा पिउने पछि उहाँलाई खाने कमला बोतल देखि. लास बीच उत्तिकै विभाजित छ सबै सहभागीहरू को एक भोज, यो एक चिन्ह छ आदर गर्न दर्शक । कमला मासु प्रोटिन मा धनी छ र प्रोटीन.
प्रशंसक को थाहा छ त्यो राम्रो जान्छ चूना संग र नुन । विधि भनिन्छ»चाट्नु.
ड्रप थुप्रो छ ।.»
सबैभन्दा को उत्पादकहरु को वास्ता आफ्नो ग्राहकहरु । बोतल मा गर्दन जोडिएको छ को एक झोला रातो पाउडर युक्त नुन, खुर्सानी मरिच र परिश्रम सुकेका लास को एक कमला. को फिर्ता मा आफ्नो हात बीच आफ्नो औंठी र छर्कने केही नुन । त्यसपछि नै औंला लिएका कागति को एक टुकडा (कागति). पहिलो तपाईं आवश्यक लिक हात संग नुन, त्यसपछि पेय मा एक सुडकना एक शट को र खाने को स्लाइस को चूना । घरमा हामी प्रतिबन्ध गर्न सक्नुहुन्छ टमाटर रस, स्वाद मसाले संग. मातेको एक सुडकना मा एक शट को पिउन । यो बाहिर जान्छ मसालेदार मिश्रण, जल गले । — मूल स्वाद को हराएको छ, पूर्ण छ । यो ज्ञान संग यो अचम्मको रक्सी पिउन म तपाईं सल्लाह गर्न प्रयास सबै तीन तरिका छ । तिनीहरूलाई एक तपाईं हुनेछ जस्तै. प्रिय प्रयोगकर्ता, प्रश्न सोध्न वा टिप्पणी छोड्नुहोस्, यो सम्भव हुनेछ सोमबार भने । मास्टर निवारण, अघिल्लो टिप्पणी र फोरम (सामान्यतया सञ्चालन) निर्णय मुद्दाहरू ।
र मेक्सिको पुरुष डेटिङ - मेक्सिको एकल मान्छे - पूरा मेक्सिको केटाहरू मेक्सिको →